IVetmedin 5 mg Capsules (Canada)
Eli phepha linolwazi ngeVetmedin 5 mg njengeeCapsule ze ukusetyenziswa kwezilwanyana .
Iimpawu zeVetmedin 5 mg njengeeCapsule
Izilumkiso kunye nezilumkiso zeVetmedin 5 mg
Ulwalathiso kunye nolwazi lwedosi yeVetmedin 5 mg njengeeCapsule
Vetmedin 5 mg njengezingxobo
I-1.25 mg, i-2.5 mg, i-5.0 mg yeepilisi njengeenja
Vetmedin®I-1.25 mg capsule iqulethe i-1.25 mg pimobendan.
Vetmedin®I-2.5 mg capsule ine-2.5 mg pimobendan.
Vetmedin®Iphilisi eyi-5 mg iqulethe i-5 mg pimobendan.
I-Pimobendan, isiphumo esivela kwi-benzimidazole-pyridazinone, yinto engeyo-sympathomimetic, engeyo-glycoside inotropic into eneempawu ezinamandla ze-vasodilatative.
I-diclofenac sod ec 75 mg
I-Pimobendan inefuthe layo le-myocardial yempembelelo yendlela yokusebenza kwento: ukonyusa ubuntununtunu be-calcium yemofilaments yentliziyo kunye nokuthintela i-phosphodiesterase (uhlobo III).
Ikwabonisa isenzo se-vasodilating ngokwenza isenzo sokuthintela umsebenzi we-phosphodiesterase III. Ukulandela ulawulo lomlomo lweVetmedin®njengeepilisi, ukungafumaneki ngokupheleleyo komgaqo osebenzayo yi-60-63%. Kuthetha ukubopha kweeproteni yeplasma ngama-93%. Ukupheliswa kweplasma-isiqingatha sobomi be-pimobendan imalunga nemizuzu engama-30 kwaye eyona nto iphambili esebenzayo yokuphelisa isiqingatha sobomi imalunga neeyure ezi-2. Phantse yonke idosi isuswe ngendle.
Ukunyamezelana kwe-pimobendan kuvavanyiwe kwizifundo zaphambi kweklinikhi kwizinja zeBeagle ezisempilweni ezineentliziyo ezingaguli. Ulawulo lwe-intravenous yangaphakathi lwe-pimobendan kwiidosi ze-0.5 mg / kg ukuya kwi-8.0 mg / kg kwithuba leeveki ezi-2 ukuya kwezi-4 ezinxulunyaniswa nokunyanzeliswa kwesivumelwano se-myocardial kunye nezilonda zejeti kwi-myocardium. Ezi dosi zangaphakathi zifana needosi zomlomo zexesha elinye ze-0.8 mg / kg ukuya kwi-12.8 mg / kg. Izilonda azibonwanga kumthamo we-0.25 mg / kg (olingana ne-0.4 mg / kg ngomlomo) elawulwa ngaphezulu kwe-2 ukuya kwi-4 yeveki.
I-Vetmedin 5 mg njengeeCapsule ezibonisa: Izinja
Unyango lokwehluleka kwentliziyo yokuxinana evela kwi-cardiomyopathy okanye kwi-valvular insufficiency. Kuyacetyiswa ukuba ukufumanisa ukusilela kwentliziyo yokuxinana kuqinisekiswe yiradiographs okanye ukuphendula kwendlela yokuchama.
Unyango kufuneka luqaliswe kuphela kwiimeko ezinophawu oluya kuthi luxhamle ekunyukeni kwesivumelwano se-myocardial (positive inotropy).
I-Vetmedin 5 mg Isampuli yedosi kunye noLawulo
Vetmedin®Iifomsile kufuneka zenziwe ngomlomo kuluhlu lwethamo lwe-0.2 mg ukuya kwi-0.6 mg pimobendan / kg ubunzima bomzimba ngosuku. Idosi ekhethiweyo yemihla ngemihla yi-0.5 mg pimobendan / kg ubunzima bomzimba. Idosi kufuneka yahlulwe ibe ziiphathi ezimbini (0.25 mg / kg nganye), isiqingatha sedosi kusasa kunye nesiqingatha malunga neeyure ezili-12 kamva. Idosi nganye kufuneka inikwe malunga neyure enye ngaphambi kokondla.
Vetmedin®Iifomsile zinokudityaniswa nonyango lwe-diuretic olufana ne-furosemide.
IVetmedin 5 mg njengeeCapsules ezilumkisiweyo
I-fibrillation ye-Atrial yenzeka ngesiqhelo kumatyala okusilela kwentliziyo kunye nokubonisa isifo esikhuselekileyo. Ngokwendlela elungileyo yezilwanyana, izinja ezinesifo sentliziyo esomeleleyo kufuneka zijongwe ukubakho kwe-arrhythmias ngexesha lonyango lwentliziyo. I-anti-arrhythmic efanelekileyo kufuneka iqaliswe ukuba ibonisiwe.
Vetmedin®Iifomsile akufuneki zisetyenziswe kwimeko ye-hypertrophic cardiomyopathies okanye iimeko zeklinikhi apho ukonyuka kokukhutshwa kwentliziyo akunakwenzeka kwizizathu ezisebenzayo okanye ze-anatomical (umzekelo, aortic stenosis).
Sebenzisa Ngexesha lokukhulelwa kunye nokuLactation
Kwizifundo ezineempuku kunye nemivundla, i-pimobendan ayinampembelelo ekuchumeni nakwimiphumo ye-embryotoxic eyenzeke kuphela kwiidosi ze-maternotoxic. Kuvavanyo lweempuku kubonisiwe ukuba ipimobendan ikhutshiwe kubisi.
Ipilisi emhlophe eyi-a333
Ke ngoko, uVetmedin®Iicapsule kufuneka zenziwe kuphela kwimigca ekhulelweyo kunye neencancisayo ukuba izibonelelo zonyango ezilindelweyo zingaphezulu komngcipheko onokubakho.
Kuhlala kukho umngcipheko wokunxibelelana kweziyobisi xa usebenzisa amayeza amaninzi kwisigulana esenzakeleyo okanye esineengxaki. Sebenzisa ngononophelo kunye nezinye i-inotropes ezilungileyo. Njengoko i-pimobendan iboshwe kakhulu yiprotein, jonga ngononophelo xa usebenzisa amanye amachiza ane-protein ephezulu ebophayo. Ukusetyenziswa ngaxeshanye kwe-beta-blockers okanye i-calcium-channel blockers kunokunciphisa iziphumo ezibangelwa yi-pimobendan kwisivumelwano se-myocardial.
I-Pimobendan elawulwa njenge-overdose ngomlomo inokubangela ukugabha okuninzi. Izigulana kufuneka ziphathwe ngokwempawu.
Iziphumo ezilindelekileyo zilandelayo zichazwe emva kokusetyenziswa kweklinikhi.
I-Cardiovascular: I-Tachycardia (inokuba ixhomekeke kwidosi kwaye ithintelwe ngokunciphisa idosi).
Isisu: Ukuhlanza, urhudo, ukungasebenzi.
Inkqubo yovalo / Ukuziphatha: Ukungazithembi, ukungalungelelani, ukuxhuzula.
Ingqondo: Polyuria, polydypsia.
Isilumkiso: QHUBEKA NOKUFIKELELA KWABANTWANA.
Ukuba kwenzeka ityhefu, qhagamshelana nogqirha okanye iZiko loLwazi ngeTyhefu.
Gcina ngaphantsi kwama-25 ° C. Gcina isikhongozeli sivalekile.
yenza zofran ikwenze wozele
I-Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd., iBurlington, Ontario L7L 5H4
60004058 / CA / 1
Uluhlu lwamayeza okulahleka kobunzima
Inombolo ye-NAC: 12300501
IBHOHERINGERI INGELHEIM (CANADA) LTD.
INDLELA YENKONZO YASEMZANTSI YAMA-5180, IBURLINGTON, ON, L7L 5H4
Inombolo yoKhathalelo loMthengi. Ngama-800-567-1885
Iinkonzo zobuGcisa No .: 1-877-565-5501
Indawo yeWebhusayithi: www.boirrzinto.ind
Kwenziwe zonke iinzame zokuqinisekisa ukuchaneka kweVetmedin 5 mg yeCapsules yolwazi olupapashwe apha ngasentla. Nangona kunjalo, kuhleli kuluxanduva lwabafundi ukuba baziqhelanise nolwazi ngemveliso equlethwe kwileyibhile yemveliso yaseCanada okanye ukufakwa kwephakheji.
isixhobo sokuphumla kunye notywala
itshathi ye-mucinex yabantwana
Imicimod cream 5 iziphumo ebezingalindelekanga
keflex usulelo izinyo
petarmor kunye neziphumo ebezingalindelekanga
Ndingayithatha i-tramadol kunye ne-ibuprofen